तत्काल अस्ट्रेलियामा रोजगारीको आवसर मासिक ४ लाख सम्म पूरा पढनुहोस
काठमाडौ । अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसका कारण भइरहेको जनशक्ति अभाव कम गर्न विद्यार्थीले काम गर्न पाउने समय बढाएको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार यो प्रावधान अस्थायी रूपमा केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेछ । अस्ट्रेलियाली गृहमन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै वर्तमान कठिन अवस्थामा स्वास्थ्य,.....
खुसिको खबर रमेस प्रसाईं कि श्रीमतीको आखा बाट अन्धकार हट्यो (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बहुमुखी प्रतिभाका धनि स्पष्ट वक्ता रमेश प्रसाई विवाह बन्धनमा बाधिन लागेका छन् । उनले कालिकोटकी नन्दासिंहसँग लगनगाठो कस्न लागेका हुन् । उनका सहयागी साथी जीवन विष्टले सामाजिक सञ्जालमा बिहेको कार्ड पोष्ट गर्दै आफू र रमेशले यही मंसिर २२ गते सोमबार विवाह बन्धनमा.....
माल्टामा रोजगारीको अवसर, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, सेवा शूल्क ३० हजार मात्रै
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको लागि माल्टाबाट नेपाली श्रमिकको लागि माग आएको छ । माल्टाको इस्टन कन्सल्टेन्सी सर्भिस कम्पनीले विभिन्न १२ पदका लागि ५८ जना नेपाली श्रमिकको माग गरेको छ । नेपालको अक्सन इन्टरनेशनल प्रा. लिले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट माल्टाको डिमाण्ड पुर्व स्वीकृति लिएर विज्ञापन.....
पाकिस्तानि ले बनायो भिडियो मेरो रोएको भिडियो पनि छ भन्दै नेपाली चेली (भिडियो सहित)
काठमाडौ । पाकिस्तानि काण्ड बाहिरियो भन्दै सबै नेपालि लाइ चकित पार्ने भिडियो बाहिरियो हेर्नुहोस । पाकिस्तानि काण्ड बाहिरियो भन्दै सबै नेपालि लाइ चकित पार्ने भिडियो बाहिरियो हेर्नुहोस । नेपालि चेलि रुँदै मिडीया मा जबर जस्ति मेरो भिडियो बनायो हेर्नुहोस पुरा भिडियो 👇👇 । नेपालि चेलि रुँदै मिडीया मा.....
बधाई छ ट्याक्सी चालककी छोरीले पाइन स्वीजरल्यान्डमा दुई करोडको छात्रवृत्ति
काठमाडौं । मासिक रू एक सयमा नेपालको सस्तो विद्यालय समता स्कुलमा पढ्दै आएकी अस्मिता अधिकारी विश्वको महंगो स्कुलमध्ये एकमा पढ्न पाउने भएकी छन् । संसारको महंगोमध्ये एक र सुविधायुक्क्त आइगलन कलेज स्वीजरल्याण्डमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएकी हुन् । जोन कर्लेटले १९४९ मा स्थापना गरेको आइगलन विश्वकै विशिष्टमध्येको.....
बिचरी सियोना श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा फेरी समस्या, पोलण्ड जादै सिघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना
काठमाडौ । उनी एक १३ महिनाको बच्चा सियोना हुन् र उनी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप १ नामको दुर्लभ रोगबाट पीडित छिन् जसले उपचार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ र धेरै पैसा चाहिन्छ अर्थात् एनआर भन्दा बढी । २० करोड । उनका अभिभावकहरूले सहयोगको लागि अभियान गरिरहेका छन । बिभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्वहरु पनि उनीको लागि.....
आमा बन्दै श्वेता खडका
एकाएक रमेश र नन्दाको विवाह बारे यस्तो भविष्यवाणी (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौ । एबीसी टेलिभिजनमा दोहोरी गाएपछि थप चर्चामा आएका रमेश प्रसाई विवाह गर्न लागेका छन् । उनको विवाहको कुराले पनि निकै चर्चा पाएको छ । उनीसंगै दोहोरी गीत गाएपछि चर्चामा आएकी गायीका कल्पना दाहालसंग उनको नाम जोडिएको थियो । यद्धपी त्यो रमाइलोका लागि मात्र थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । दोहोरी गीत गाउँदा.....
रमेशको बिहे, कल्पना भन्छिन: लेखेको पाईन्छ देखेको पाईदैन, बिगत सम्झेर भाबुक (भिडियो)
रोचक । यो समाचार अर्थात कल्पना दाहाल र रमेश प्रसाईं को भिडियो तल अन्तिम मा रहेको छ । हेर्नुहोस अनि सक्दो सेयर गर्नुहोला । भिडियो कस्तो लाग्छ ? आफ्नो सल्लाह सुझाव वा कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला । रमेश प्रसाईले आँटे बिहे कल्पना दाहाल भन्छिन लेखेको पाईन्छ देखेको पाईदैन, बिगत सम्झेर बनिन भाबुक यो.....
बहिनीको हातबाट टीका थापेर अबेर घर फर्केका दाइको बीच बाटोमै गयो ज्यान..
भाइ-टिकाको दिन आफ्नै बहिनीको हातबाट टीका थाप्न गएका दाजुको बाटोमा ल’डेर मृ’त्यु भएको छ । अदानचुली ३ का ४५ वर्षीय रत्नपुर सुनारको बाटोमा ल’डेर ज्यान गएको हो । बहिनीको हात’बाट टिका थापेर घर फर्किने क्रममा बीच बाटो’बाट खसेर सुनारको मृ’त्यु भएको हो । अदानचुली ६ को पाम्समा विवाह गरेकी बहिनी प्रेमकला टमटा.....
बारम्बार बिजुली जान थालेपछि प्रधानमन्त्री दिए कडा चेतावनी
अब प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीलाई बहिस्कार गरौँ: राम कुमारी झाँक्री
प्रचण्डकि छोरिलाई गा’लि गर्नु भन्दा पहिला चितवन आएर विकास भएको हेर्न आग्रह
ओलिले जी न्युजलाई दिएको अन्तरवार्ता नाटक, दुबैले माफी माग्नुपर्छ: प्रचण्ड
यसकारण डाक्टर गोविन्द केसीको नियत ठिक छैन: योगेश भट्टराई
अब जनताले ज्ञानेन्द्रलाई झैँ ओलीलाई पनि लखेटेर छाडछन: पुन (सहि वा गलत ?) प्रतिक्रिया दिनुहोस
सगरमाथा भारतले दाबी गर्नुपर्छ: सुधीर चौधरी (सहि वा गलत ? प्रतिक्रिया दिनुहोला)
राष्ट्रपति भन्डारीको नाम आयो कालोसूचिमा (आखिर कसरी ? पूरा हेर्नुहोस)
जसपा नेता राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरमा लखेटियो (सहि वा गलत ?)